Daawo: Jawaari oo u sharxan xilka Godoomiyaha Baarlamaanka iyo rajadii Shariif Xasan oo ceel ku sii dhacaysa | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Daawo: Jawaari oo u sharxan xilka Godoomiyaha Baarlamaanka iyo rajadii Shariif Xasan...
Daawo: Jawaari oo u sharxan xilka Godoomiyaha Baarlamaanka iyo rajadii Shariif Xasan oo ceel ku sii dhacaysa
Xildhibaan Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, oo ahaa Guddoomiyihii Baarlamaanka waqtigiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya, intii u dhaxeysay 2012-2016 ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay maanta oo Arbaco ah in uu u taagan yahay xilka gudoomiyaha Baarlamaanka.
Waxaa uu sheegay Mudane Jawaari, inuu isa soo sharxay ka dib soda uu sheegay codsi uga yimid Shacabka Soomaaliyeed oo ku aadanaa in uu mar kale isku soo taago xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Prof. Jawaari, ayaa sheegay in xilka gudoonka Baarlamaanka uu ka mid yahay kuwa ugu culus, islmarkaana uu waajibkiisa si wanaagsan u gudan doono, hadii mar kale loo doorto xilkaasi.
“Cida noqon doonta gudoomiyaha baarlamaanka waa mid u taala golaha shacabka, waana ku rajo waynahay in markale la ii doorto xilkan” ayuu intaasi raaciyay.
Waxaa muuqata in musharixiinta gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle, ay soo badanayaan taasi oo caqabad Wayne ku ah rajada madaxwaynaha maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, kaasi oo ka mid ah musharixiinta xilka madaxwaynaha Soomaaliya.
Shariif, ayaa goor sii horaysay waxaa la sheegay in siyaasiyiinta iyo xildhibaanada K/galbeed uu ka dalbaday in aan isu soo sharxin xilkan.
Ilaa iyo hadda xildhibaanada sharxan ee kasoo jeedaa Koonfur galbeed waxaa la sheegay inay yihiin xunbo mucaarad ku ah Shariif Xasan Sheekh
Previous articleAkhriso: Sababta Xildhibaanada Jubland malatala loogu yeeray Kismaayo
Next article97 converted to Islam at Al-Aqsa in last 2 years